भन्सार महसुलबारे जानकारी - Arthapage
भन्सार महसुलबारे जानकारी
प्रकाशित मितिः ९ पुष २०७५, सोमबार ०७:२० December 24, 2018
जुनसुकै मुलुकबाट मालवस्तु पैठारी गरेपनि एउटै दरले भन्सार महसुल लाग्दछ ?
-भारत, चीनको तिव्वत र सार्क मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तुको सम्बन्धमा केही छुट प्रदान गरिएको छ । यस्तो छुट आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदान गरिन्छ ।
भन्सार कार्यालयमा के कस्ता माल वस्तुको कति दरमा राजस्व तिर्नुपर्छ भनी कसरी थाहा पाउने ?
-नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन/आर्थिक अध्यादेशबाटनै यस्तो दरवारे थाहा पाउन सकिन्छ। यसमा कुनै मालवस्तुको निकासी/पैठारीमा के कति भन्सार महसुल दर छ र त्यसमा लाग्ने अरु महसुल, कर शुल्क के कति छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको हुन्छ। यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र भन्सार विभाग वा भन्सार कार्यालयहरुबाट पनि यस्तो सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ।
पैठारीमा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुने वस्तुहरु के के हुन् ?
निम्न मालवस्तुमा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुन्छ :
रेशम किराको फुल
सिथ कन्ट्रासेप्टिभ्स (गर्भ निरोधक)साधन र गर्भ निरोधक औषधिहरु ।
पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका
वेर्न हुने किसिमको रेशमको कोया
नफड्केको वा नकोरेको ऊन
नफड्केको वा नकोरेको कपास
कपासको अवशेष, धागोको अवशेष र गार्नेटेड स्टक समेत
फड्केको वा कोरेको कपास
ख) P.O.Y उत्पादन गर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने PET CHIPS
घ) सिन्दुर, चुरा, टीका र टीकुली
ङ) जुट उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा जुट, नेपाल सरकारले पैठारी गर्ने हुलाक टिकट, पोष्ट कार्ड, हवाई पत्र, राहदानी, अन्त शुल्क टिकट, परम्परागत पात्रो, मुद्रित कितावहरु
च) मु.अ. करमा दर्ता भएका धागो उद्योगहरुले पैठारी गर्ने आंशिक चहकीलो पारिएको धागो र सवै किसिमका मानव निर्मित स्टेपुल फाइवर
छ) विद्युत सोलार वा व्याट्रीबाट मात्र चल्ने तीन पांग्रे वा चार पांग्रे सवारी वा ढुवानी साधन उत्पादन गर्ने गरी दर्ता भएका उद्योगले आफूले उत्पादन गर्ने सवारी वा ढुवानी साधनको उत्पादनमा प्रयोग गर्ने चेसिस, इन्जिन, मोटर र व्याट्री चार्जर
ज) रक्त संचार सेवाको लागि आवश्यक पर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आयात गर्ने रगत राख्ने प्लाष्टिकका थैला, ट्रान्सफ्यूजन सेट, टेष्टिङ्ग किट्स, रि–एजेन्ट तथा रक्त परीक्षण रि–एजेन्ट निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न औजार उपकरणहरु एवं रसायनहरु
झ) दृष्टिविहिनहरुले प्रयोग गर्ने सेतो छडी, स्लेट स्टाइलस, व्रेल नोट टेकर, व्रेलो रङ्ग सूचक, पानी सूचक र प्रकाश सूचक यन्त्रहरु, आवाज दिने थर्माेमिटर, व्रेल टाइप राइटर, व्रेल छडी, एवाकस, मेग्नीफाइङ्ग ग्लास, व्रेल कम्पास, व्रेल पुस्तक व्रेल इम्वोसर, व्रेल स्टेनशिल मेशिन
ञ) अपाङ्ग व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने ह्वील चेयर, ट्राइसाइकल, बैशाखीहरु, कृत्रिम अंगहरु, हेरिङ्ग एड एवं जुत्ताहरु
नपिनिएको प्राकृतिक क्याल्सियम फोस्फेटहरु
प्राकृतिक वेरियम कार्वाेनेट
म्याग्नेसियम, म्याग्नेसिया र अन्य म्याग्नेसियम अक्साइड
खनिज तत्व अन्यत्र नपरेको
मालवस्तु पैठारी हुदाँ विजकमा उल्लेख भए भन्दा कम परिमाणमा पैठारी भएमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुल लाग्छ लाग्दैन ?
-विक्रेताले विजकमा उल्लेख भए भन्दा कम मालवस्तु पठाएको यस्तो अवस्थालाई क्जयचत क्जष्ऊभलत भनिन्छ । यसरी कम भइ पैठारी भएका मालवस्तुकोे सम्बन्धमा भारतको वन्दरगाहस्थित कस्टम्स कमिश्नरले सो व्यहोरा ऋत्म् मा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिएको हुनुपर्दछ । यस्तो मालवस्तु पैठारी गर्दा सुरुमा लाग्ने महसुल धरौटीमा राखी छुटाउनु पर्दछ । पछि वीमा रकम प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरी महसुल छुट दिन सक्दछ ।
विक्रेताबाट मालवस्तु पूरा शिपमेन्ट भै आएको तर बाटोमा हराए वा दुर्घटना परी कम पैठारी हुन आएको अवस्थामा भन्सार महसुल लाग्छ लाग्दैन ?
-भन्सार ऐन मा भएको व्यवस्था पालना भएको अवस्थामा महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ |
पछि फिर्ता लैजाने गरी अस्थायी रुपमा पैठारी भएका मालवस्तु नेपालमा लाग्ने महसुल तिरी राख्न पाइन्छ, पाइदैन ?
१. कार्ने अन्तरगत आयात भएको सवारी साधनहरु र महसुल तिरी अस्थायी पैठारी भएका विदेशी दर्ताका सवारी साधनहरु महसुल तिरी स्थायी रुपमा नेपालमा राख्न पाईदैन । विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले पछि फिर्ता लैजाने गरी अस्थायी रुपमा पैठारी गरेका पुराना सवारी साधनहरु पनि नेपालमा महसुल तिरी राख्न पाइदैन ।
२. द्धिपक्षीय संझौता अन्तर्गत आयोजना वा ठेकेदारका नाममा पछि फिर्ता लैजाने गरी आयात भएका सवारी/ढुवानी साधनहरु, मिल मेशिनरी एवं उपकरण र औजारहरु, तथा मेला प्रदर्शनी एवं हाटबजारको लागि ल्याइएका मालसामानहरु नेपालमा तोकिएको अवधि भित्रै नियमानुसारमहसुल तिरी राख्न वा विक्री गर्न पाइन्छ ।
महसुल तिरी अस्थायी पैठारी गर्दा सवारी साधनहरुमा के कति महसुल लाग्दछ र नेपालमा कति अवधिसम्म राख्न सकिन्छ ?
१) कार, जीप, र भ्यानमा दैनिक रु.४००
२) बस, मिनीबस लगायत टुरिष्ट गाडीमा दैनिक रु. ४००
३) मोटर साइकाल र स्कुटरमा दैनिक रु. १००
४) तीन पांग्रे सवारी साधनमा दैनिक रु. ३००
यस प्रकार महसुल तिरी पैठारी भएका सवारी साधनहरु एक वर्षमा तीस दिन भन्दा बढी नेपालभित्र राख्न पाइदैन ।
सिमावर्ती नजिकको बजारसम्म ल्याउने सवारी साधनहरु सम्बन्धमा केही सहुलियत छ कि ?
-नजिकको बजारसम्म पुगी सोही दिन फर्कने भएमा कुनै महसुल लाग्दैन । यसका लागि भन्सार विन्दुमा दर्ता गराइएको कागजात अनिवार्य रुपमा हुनु पर्दछ ।
काठमाडौं – दिल्ली झैं संचालन भएका यात्रुवसको हकमा के कति महसुल लाग्दछ ?
-दुई देश वीच भएको संझौता वा सहमति बमोजिम संचालन गरिएका यात्रु वाहक वस तथा मिनीबसहरुको सम्बन्धमा संझौता/सहमतिमा तोकिए बमोजिम नै हुन्छ ।
नेपालमा मालवस्तुहरुको परिवहनको लागि आएका ट्रयाक्टर वाहेकको खाली ढुवानी साधनमा कति महसुल लाग्दछ ?
-प्रतिदिन एकहजार पाँचसय रुपैयाँका दरले भन्सार महसुल लिई एकपटकमा सातदिनको अवधिको लागि अस्थायी पैठारी गर्न दिन सकिने व्यवस्था छ ।
विदेशबाट मालवस्तु लोड भै आएको ढुवानी साधन एवं कन्टेनर ट्रेलरमा कति महसुल लाग्दछ ?
-मालवस्तु लोड भै आएका यस्ता ट्रक एवं कन्टेनर ट्रेलरलाई गन्तव्य स्थलमा मालसामान अनलोड गरी भन्सार विन्दुमा प्रवेश गरेको ७२ घण्टा भित्र रित्तो फर्केमा कुनै महसुल लाग्दैन । यसैगरी भन्सार क्षेत्रभित्र रहेको मालवस्तु लोड गर्न आएको रित्तो कन्टेनर ट्रेलरका हकमा पनि ७२ घण्टा भित्रै फर्केमा कुनै महसुल लाग्दैन । तर भन्सार क्षेत्र वाहिरबाट मालवस्तु लोड गरी ४८ घण्टा भित्रै फर्केमा एक दिनको मात्र अस्थायी पैठारी महसुल लाग्दछ ।
तोकिएको समयावधिमा फिर्ता नभएकाको हकमा के हुन्छ ?
-जफत हुन सक्छ । तर मनासिव कारण भएमा सवारी साधनको मूल्यमा नवढ्ने गरी बढी बसेको अवधिको हकमा मोटरसाइकलमा प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँ र अरु सवारी साधनमा दैनिक दुइ हजारका दरले महसुल लिई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका प्रमुखले छाड्न सक्दछ ।
मालवस्तु लोड भै आएका ट्रक एवं कन्टेनर ट्रेलरहरु बन्द, हड्ताल आदि कारणले तोकिएको समयावधि भित्र फिर्ता हुन नसकी रोकिन गएको हकमा के हुन्छ ?
-बन्द, हडताल, दैवी प्रकोप, दुर्घटना जस्ता कारणले ७२ घण्टा भित्र फिर्ता हुन नसकेकोमा भन्सार प्रमुखले बढीमा अर्काे तीन दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने र थप दिइएको अवधिको महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ ।
ट्रयाक्टर र ट्रेलरको अस्थायी पैठारी सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ?
-अस्थायी पैठारी गरिने ट्रयाक्टरमा दैनिक तीन सयका दरले महसुल लाग्दछ । ट्रेलर फिट भएको ट्रयाक्टर वा ट्रेलर मात्र अस्थायी पैठारी गरी ल्याएमा दैनिक ६ सयका दरले महसुल लाग्दछ । तर मालसामान लोड भै आएको हकमा ४८ घण्टा भित्र रित्तै फर्किएमा महसुल लाग्दैन ।
अस्थायी पैठारी गरिने यस्ता ट्रयाक्टर र ट्रेलरलाई कति दिन सम्म नेपालमा राख्न सकिन्छ ?
-तीस दिन भन्दा बढी नेपालमा राख्न पाइदैन । राखेमा जफत हुन सक्छ ।
मालवस्तु छुटाउँदा माल धनी स्वयं भन्सार कार्यालयमा उपस्थिति हुनु पर्दछ कि कुनै प्रतिनिधिको माध्यमबाट पनि आफ्नो मालवस्तु छुटाउन सकिन्छ ?
-मालवस्तु धनीको प्रतिनिधि भई भन्सार कार्यालयबाट निकासी/पैठारी सम्बन्धी कार्य गर्न भन्सार विभागबाट भन्सार एजेण्टको इजाजत लिएका फर्म वा व्यक्तिहरु हुन्छन् । ती व्यक्तिहरुलाई भन्सार एजेन्ट भनिन्छ । भन्सार एजेन्टलाई नियुक्ति गरी आफ्नो मालवस्तु छुटाउने कार्य गराउन सकिने भएकोले माल धनी स्वयं उपस्थित हुन अनिवार्य छैन ।
निकासी भएको मालवस्तु पुन पैठारी भएमा महसुल लाग्छ/लाग्दैन ?
-हुलाकबाट पठाएको वस्तु बुझाउन नसकि फिर्ता आएमा, विदेशमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले लिन अस्वीकार गरी फिर्ता आएमा वा दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपमा परी गुणस्तर कायम रहन नसकि फिर्ता आएमा महसुल नलाग्ने अन्यथा महसुल लाग्छ ।
नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी भएको मालवस्तु फिर्ता भएमा सो को कच्चा पदार्थमा दिइएको महसुल छुट असुल गर्नु पर्छ/पर्दैन ?
-निकासी भएको सामान फिर्ता आएमा सो को कच्चा पदार्थमा महसुल छुट दिइएको भएमा असुल गर्नु पर्छ ।
मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आईपुग्नु अगावै प्रज्ञापन पत्र दर्ता भई सकेको रहेछ र मालवस्तु जाँचपास हुने दिन विनीमय दर वा भन्सार तथा करका दरहरु फरक परेमा प्रज्ञापन पत्र दर्ता गरेको दिनको दर कायम हुन्छ वा जाँचपास गरेको दिनको कायम हुन्छ ?
-कम्प्यूटरमा प्रविष्ट भएको वा प्रज्ञापनपत्र दर्ता भएको मितिमा कायम रहेको दर बमोजिम महसुल तिर्नु पर्छ ।
नेपालको भूमि भई विदेशी मुलुकको एक ठाउँबाट विदेशी मुलुकको अर्काे ठाउँमा महसुल सुविधामा मालवस्तु पारवहन गर्न के गर्नु पर्दछ ?
-यसको लागि भंसार विभागमा कारण सहित आयात हुने र निर्यात हुने भंसार विन्दु र सामानको विवरण सहित निवेदन दिनु पर्दछ । यस्तो निवेदनमा भंसार विभाग सन्तुष्ट भएमा स्वीकृति प्रदान गर्दछ । भंसार विभागले नेपालस्थित सम्बन्धित दूतावास वा कूटनीतिक नियोगको सिफारिस माग्न पनि सक्दछ ।
कुटनीतिक सुविधा भनेको कस्तो सुविधा हो ?
-कुनै मालवस्तु जाँच नगरी महसुल नलिई लगत मात्र राखि पैठारी गर्न दिइने सुविधालाई कुटनीतिक सुविधा भनिन्छ ।
महसुल सुविधा भनेको कस्तो सुविधा हो ?
-कुनै मालवस्तु महसुल नलिई जाँच गरी वा नगरी लगतमा राखी पैठारी गर्न दिइने सुविधालाई महसुल सुविधा भनिन्छ ।
कुटनीतिक सुविधा तथा महसुल सुविधा कसले र कति पाउँछन् ?
-नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोग तथा ती नियोगहरुमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई यो सुविधा दिइन्छ । यस्तो सुविधा कति दिने भन्ने विषयमा भियना सन्धि र पारस्परिकताको आधारमा नेपाल सरकार,परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्धारण गरेवमोजिम हुन्छ ।
आयोजना वा ठेकेदारका नाममा पैठारी हुने मालवस्तुमा पनि भन्सार छुट हुन्छ ?
बैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा संचालन गरिने आयोजनाको लागि त्यस्ता आयोजना वा आयोजनाका ठेकेदारका नाममा पैठारी हुने मालवस्तुमा द्धिपक्षीय संझौता बमोजिम पूर्ण वा आंशिक रुपमा भन्सार महसुल छुट पाउँछन् ।
प्रकाशित मितिः ९ पुष २०७५, सोमबार ०७:२० |
Prevनेपालगन्जमा पनि भित्रिदै फ्लोरी कल्चर
Nextअर्थमन्त्रीको आश्वासन पछि छोटी भन्सार सन्चालनको आशा